डिजिटल स्वागत स्क्रीन - सजिलो बहु प्रदर्शन - डिजिटल साइनेज सफ्टवेयर
डिजिटल स्वागत स्क्रिन
कार्यालय स्वागत, घटना केन्द्रहरू, आतिथ्य
तपाईंको ग्राहकहरु लाई स्वागत छ
चाहे तपाइँ तपाइँको अफिस मा तपाइँको ग्राहकहरु देख्न, वा तपाइँ हजारौं मानिस संग ठूलो कार्यक्रम होस्ट, Easy मल्टि डिस्प्ले तपाइँलाई तपाइँको पाहुनालाई सहज संग स्वागत गर्न मद्दत गर्दछ। चाहे तपाइँ जेनेरिक अभिवादन प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ, वा तपाइँको विशेष पाहुनाहरूको लागि निजीकृत स्वागत छ, तपाइँ यसलाई EMD को साथ गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको पाहुनाहरूलाई स्वागत गरेपछि, तपाईं तपाईंको व्यवसाय वा घटनाको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कार्यक्रम, दिशाहरू र प्रस्तावमा अन्य सेवाहरू।
हाम्रो फिजियोथेरापी अभ्यासमा गतिशील साइनेजले हाम्रा बिरामीहरूलाई सूचित गर्दछ र तिनीहरूलाई आश्वासन दिन्छ। नामहरूको पछाडि अनुहार राख्न यसले सम्भव बनाउँदछ! हामी हाम्रो बिरामीहरूका लागि व्यावहारिक सल्लाहहरू पनि प्रदर्शन गर्दछौं। यो उपयोगी छ र यसले प्रतीक्षालाई छोटो महसुस गराउँछ।
EMD को एक मूल्य छ कि सबै प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा गर्दछ! मूल्य अद्वितीय र धेरै फाइदाजनक छ र कुनै लुकेका शुल्कहरू छैनन्। EMD टोली मेरो सबै आवश्यकताहरु को लागी धेरै उत्तरदायी र चौकस छ।
युनिसेफमा, हामी हाम्रो लबीमा इजी मल्टी डिस्प्ले प्रयोग गर्छौं, संसारभरिका बच्चाहरूलाई मद्दत गर्ने हाम्रो कार्यहरू प्रदर्शन गर्न। यो हाम्रो अवसरलाई गतिशील तरिकामा प्रदर्शन गर्ने भावना हो - भावनाको साथ।
हाम्रो शोरूमहरू र भ्रमण गर्नुहोस्